dopamine precursor depletle (၂၀၁၂) - Your Brain On Porn အရအလေ့အထအပေါ်မှီခိုအားထားရာရည်မှန်းချက်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်။
dopamine ရှေ့ပြေးတွေပျက်စီးမှု (2012) အောက်ပါရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအလေ့အထအပေါ်မှီခိုအားထား
comments: Depleting dopamine လေ့အပြုအမူတွေအပေါ် သာ. ကြီးမြတ်မှီခိုနှင့်ပိုပြီးအခက်အခဲရည်မှန်းချက်ညွှန်ကြားအပြုအမူနှင့်အတူတည်းခိုခဲ့သည်။ စှဲထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ဘယ်အရာကိုတူနေတယ်။
Psychopharmacology (Berl) ။ 2012 Jan;219(2):621-31. doi: 10.1007/s00213-011-2563-2.
က de ကျေး S1, ရပ်နေ HR, Devito EE, ရော်ဘင်ဆင် OJ, Ridderinkhof KR, Robbins TW, Sahakian BJ.
Dopamine ကောင်းစွာသင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှလူသိများသည်။ မကြာသေးမှီကတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများလှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုအလေ့အထများ၏အားဖြည့်အတွက်အဖြစ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူအတွက် dopamine ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပါပြီ။ သို့သော်လူ့အရေးယူထိန်းချုပ် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနေဆဲကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ။
ကျနော်တို့လေ့နှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူထိန်းချုပ်မှုများအကြားချိန်ခွင်လျှာအပေါ်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် dopamine function ကိုလျှော့ချ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ပထမဦးဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြ။
စူးရှသောအစားအသောက် phenylalanine နှင့် tyrosine လျော့ကျ (APTD) ၏အစားအသောက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအရေးယူထိန်းချုပ်မှုအပေါ်လျှော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ dopamine function ကို၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်မွေးစားခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုကျပန်းတစ်ဝတ္ထုသုံးဇာတ်စင်စမ်းသပ်ပါရာဒိုင်းအပေါ်စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုအကြား-ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ခွင့်ပြုပါရန် APTD သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုသည် (NS = 14) ဖြစ်စေဖို့တာဝန်ကျတယ်။ ကနဦးသင်ယူမှုအဆင့်မှာတော့သင်တန်းသားများကိုအကြိုးရလာဒ်ရရှိနိုင်ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ရန်သင်ယူခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးရလဒ်ကို-တန်ဖိုးစမ်းသပ်မှုနှင့်တစ်ဦးစာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်သင်တန်းသားများကိုပြင်သာပြောင်းသာရလဒ်များ၏လိုလားပြောင်းလဲမှုများ၎င်းတို့၏အပြုအမူထိန်းညှိဖို့နိုငျခဲ့ကွရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
APTD လှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုသင်ယူမှုတားဆီးဘူး, မကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆက်တွဲရလဒ်ကို-တန်ဖိုးစမ်းသပ်မှုအတွက်သင်ယူမှုချို့ယွင်းတုံ့ပြန်မှု-ရလဒ်ကိုအဘို့သက်သေအထောက်အထားကိုရှာဖွေခဲ့ပေ။ ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်လေ့စနစ်များစာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်မှုအတွက်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့်အခါသို့သော်, APTD လေ့ထိန်းချုပ်မှုကိုဦးတည်ချိန်ခွင်လျှာတင်ရန်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းဖို့ကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့လူသားတွေအတွက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်လေ့ထိန်းချုပ်မှုများအကြားချိန်ခွင်လျှာ dopamine မှီခိုကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားများကိုပေး။ ရလဒ် dopamine function ကိုနှင့် psychopathologies အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု၏အလင်းထဲမှာဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဤဆောင်းပါး၏အွန်လိုင်းဗားရှင်း (Doi: 10.1007 / s00213-011-2563-2) အခွင့်အာဏာသည်အသုံးပြုသူများမှရရှိနိုင်သည့်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ, ပါဝင်သည်။
keywords: Dopamine, tyrosine ကွယ်ပျောက်သွားစေ, ကငျြ့, ပန်းတိုင်-ညွှန်ကြားအရေးယူမှု, ကျားမကွဲပြားမှု, သင်ယူ
အပြုအမူကျော်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုနိုင်စွမ်းကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီပြင်သာပြောင်းသာလက်ရှိလိုအပ်ချက်နှင့်အလိုဆန္ဒများနှင့်အညီ၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်များကိုထိန်းညှိဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သို့သော်ရံဖန်ရံခါ '' လုပ်ဆောင်ချက်စာရွက်များ '' ကြောင်းရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်မှုလှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှု (SR) အလေ့အထများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ထုတ်ဖေါ်။ Dual-system ကိုသီအိုရီအရ, နှစ်ခုအကြားချိန်ခွင်လျှာနောက်ဆုံးမှာအမူအကျင့်ကို output (က de ကျေးများနှင့် Dickinson ဆုံးဖြတ်သည် 2009; Dickinson 1985) ။ ဒါဟာအယူအဆနေ့လယ်စာရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးတနင်္ဂနွေနေ့လယ်အပေါ်မြို့သို့စက်ဘီး၏ဥပမာနှင့်အတူရုပ်ပြနိုင်ပါသည်။ တဦးတည်းအာရုံပြံ့လှငျ့ဖြစ်လာသည်နှင့်ယာယီဒီရည်မှန်းချက်၏အာရုံရှုံးလြှငျ, တဦးတည်းမိမိကိုယ်ကိုအစားရုံးခန်းဆီသို့ဦးတည်လေ့စက်ဘီးကိုရှာဖွေပေမည်။ ဥပမာအားဖြင့်လမ်း၏ရှေ့တော်၌ရုံးဆီသို့ဦးတည်ထွက်ခွာလှည့်များ၏တုံ့ပြန်မှုထွက်လာပါတယ်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်ထိုသို့သောစာရွက်များ, SR အသင်းအဖွဲ့များကနေတစ်ဆင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အားသာချက်ရှိပါတယ်သွားရမည်အကြောင်း, တုံ့ပြန်လေ့လျော့နည်းသိမြင်မှုကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ခံအာရုံကြောစနစ်များအကြားချိန်ခွင်လျှာ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအလုပ်လုပ်တဲ့အဖြစ်အလုပ်မဖြစ်အပြုအမူကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုနောက်ထပ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့် psychopathology မှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်း, ကြီးသောလူ့အဖွဲ့အစည်းအရေးပါမှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်နိုင်ပါတယ်။
ယခင်တိရိစ္ဆာန်သုတေသနလေ့နှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားနှစ်ဦးစလုံးအပြုအမူအတွက် dopamine (DA) ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ DA-တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးအလေ့အကျင့်များနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထံမှလေ့ထိန်းချုပ်မှုဖို့အကူးအပြောင်းအရှိန်မြှင့်ပြခဲ့ကြ (Nelson နှင့် Killcross 2006), နေစဉ် nigrostriatal DAergic လမ်းကြောင်းမှတွေ့ရှိရပါသည် Faure et al (အလေ့အထဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီး။ 2005). အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူမှုနှင့်ရလဒ်ကိုခန့်မှန်း ventromedial prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens (ပါဝငျသော DAergic ဆားကစ်ကထောက်ခံစေခြင်းငှါet al အားပေးစရာ။ 2007; goto နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2005; Hitchcott et al ။ 2007).
ဒီတော့ဝေးလူသားများအတွက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်လေ့ထိန်းချုပ် DA တစ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားတွေနေဆဲချို့တဲ့သော, ဒါပေမယ့်အခြေခံ DA အဆင့်ဆင့် maladaptive အပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍများစွာတောင်းဆိုမှုများရှိခဲ့ပါပြီ။ ဥပမာ, DA လေ့နောက်ဆုံးမှာ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာထဲမှာအခန်းကဏ္ဍမှထင်နေသည် (ဘီးလင်းနှင့် Everitt 2008; Everitt et al ။ 2001; Everitt နှင့် Robbins 2005; Vanderschuren et al ။ 2005) ။ အလားတူပင် DA ဝမ် et al (အဝလွန်ခြင်းအတွက်ထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအစားအစာ-ရှာပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါသည်။ 2001) ။ ထစ်အငေါ့အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးလည်း obsessive-compulsive ရောဂါနှင့် Tourette syndrome ရောဂါ (Gillan et al အတွက်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍမှထင်နေသည်။ 2011; Graybiel နှင့် Rauch 2000), အရာ DA အဲဒီ receptor ရန်နဲ့ကုသနိုင်ပါတယ် (McDougle et al ။ 1994), နှင့် anorexia nervosa (Steinglass နှင့် Walsh အတွက် 2006), တိုးမြှင့ DA အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှု (ဖရန့် et al နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်တဲ့အခွအေနေ။ 2005).
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့စူးရှ phenylalanine နှင့် tyrosine လျော့ကျမှတဆင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ DA ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်လျှော့ချခြင်းဖြင့် (APTD) SR သင်ယူမှုနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူအကြားချိန်ခွင်လျှာအတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး (Harmer et al ။ 2001; Montgomery et al ။ 2003; ရော်ဘင်ဆင် et al ။ 2010; Vrshek-Schallhorn et al ။ 2006က) ဝတ္ထုဆာပပါရာဒိုင်း (က de ကျေး et al အပေါ်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းစမ်းသပ်မီ။ 2009a, 2007) ။ ဒီပါရာဒိုင်း၏ကနဦးဆာပသင်ယူမှုဇာတ်စင်များတွင်ပါဝင်သူအချို့တုံ့ပြန်မှုကွဲပြားခြားနားသောလှုံ့ဆော်မှုများမျက်မှောက်၌အကြိုးရလာဒ်မှဦးဆောင်ကြောင်းစမ်းသပ်မှု-and အမှားအားဖြင့်သိရှိခဲ့၏။ တစ်နောက်ဆက်တွဲရလဒ်ကို-တန်ဖိုးစမ်းသပ်မှုများတွင်ဤရလဒ်များအချို့သင်တန်းသားများကိုနေဆဲ-တန်ဖိုးရှိသောရလဒ်များဆီသို့ဦးတည်သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုညွှန်ကြားဖို့တုန့်ပြန်-ရလဒ်ကို (Ro) ဆက်ဆံရေးဟာသူတို့ရဲ့အသိပညာသုံးစွဲဖို့ရှိတယ်လို့ထိုကဲ့သို့သော devalued ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်စာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်မှုအတွက်သင်တန်းသားများကိုမူလသင်ယူမှုဇာတ်စင်ကနေလှုံ့ဆော်မှုပြသခဲ့ကြသည်နှင့်အရွေးချယ်နေဆဲ-တန်ဖိုးရှိသောရလဒ်များ (Gillan et al ၏ရရှိမှုအချက်ပြကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ 2011). လွှမ်းမိုးရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်မှုတုံ့ပြန်ကောင်းသောရွေးချယ်တွင်ထင်ဟပ်ရပါမည်။ ပြောင်းပြန်သင်တန်းသားများကို SR အသင်းအဖွဲ့များအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မှီခိုခဲ့ကြပါလျှင်, သူတို့က '' လုပ်ဆောင်ချက်စာရွက်များ '' ကျူးလွန်သင့်တယ်, ယခု-devalued ရလဒ်များအချက်ပြကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုနှိမ်ဖို့ပျက်ကွက်တွင်ထင်ဟပ်။
ကျနော်တို့မကြာသေးမီက OCD လူနာလုပ်ဆောင်ချက်စာရွက်များဖို့အတော်လေးအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းပြရန်ဤပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြ (Gillan et al ။ 2011) ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ (က de ကျေး et al ရောဂါပြင်းထန်မှုတိုးပွားလာနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာကြောင်းပါကင်ဆန်ရောဂါဝေဒနာရှင်တစ်ဦးရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလိုငွေပြမှုအဘို့သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့သည်။ 2011) ။ အဆုံးစွန်သောတွေ့ရှိချက်ကတော့ ventral corticostriatal ဆားကစ်အတွက်တိုးတက်သော DA ကွယ်ပျောက်သွား related စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ပါကင်ဆန်ရောဂါအပိုဆောင်း neurotransmitter စနစ်များအတွက်ပြတ်တောက် (Agid et al နှင့်ဆက်စပ်သည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်သတိနဲ့ကဤတွေ့ရှိချက်ပြုမူဆက်ဆံသင့်ပါတယ်။ 1993; ဒူဘွာ et al ။ 1990), နှင့်ဆေးဝါးဆိုးကျိုးများလည်း, ဤတွေ့ရှိချက်များလှူဒါန်းခဲ့ကြပေမည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကမ္ဘာ့စီးပွားရေး DA အဆင့်ဆင့်ကျန်းမာယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ရောဂါ၏သဖွငျ့သက်ရောက်မှုမရှိဘဲနှင့်အဲဒီ receptor မျိုးကွဲအပေါ်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်နှင့်အတူရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်လေ့အရေးယူထိန်းချုပ်မှုများအကြားတစ်ခုအချိုးမညီမျှမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေ attenuated သောအယူအဆစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီအဆုံးကျနော်တို့ APTD များ၏အစားအသောက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမွေးစားခြင်းနှင့်ဆာပသင်ယူမှုပါရာဒိုင်းအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ယုတ်လျော့ DA function ကို၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။
လုပျထုံးလုပျနညျးဟာ Hertfordshire သုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မီတီ (08 / H0311 / 25) ကအတည်ပြုခြင်းနှင့် 1975 ၏ဟယ်လ်စင်ကီကြေညာစာတမ်းနှင့်အညီကြ၏။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုကြိုတင်လေ့လာမှု့မှစာဖြင့်ရေးသားအသိပေးသဘောတူညီခကျြကိုပေး၏။ စမ်းသပ်ခြင်း Addenbrooke ဆေးရုံ, ကိန်းဘရစ်မှာ Wellcome Trust မှလက်တွေ့သုတေသန Facility မှာအရပျကိုယူခဲ့ပါတယ်။
သင်တန်းသားများကိုဒေသခံ mail နဲ့ပိုစတာကြော်ငြာတွေကတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုသူတို့လေ့လာမှုစံနှုန်းများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ကြောင်းသေချာစေရန်တယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးခြင်းဖြင့် Pre-ပြခဲ့သည်။ စီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်, စိတ်ရောဂါရောဂါသို့မဟုတ်အာရုံကြောရောဂါ၏သမိုင်း, အဓိကနာမကျန်း၏သမိုင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, အလွန်အကျွံအရက်စားသုံးမှုနှင့်သတိလစ်မေ့မြောအတွက်ရရှိလာတဲ့ဦးခေါင်းဒဏ်ရာအောက်ပါအတိုင်းဖယ်စံခဲ့ကြသည်။ ဝင်ရိုး 1 စိတ်ရောဂါရောဂါ၏သမိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးနှင့်အတူသင်တန်းသားများ, ဒါမှမဟုတ်သူကိုလက်ရှိတွင် psychoactive ဆေးယူပြီးခဲ့ကြသည်ကိုလည်းဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ဆေးရုံသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်တစ်ဦးကစက္ကန့်စိစစ်မယ့်ထရိန်နင်ဆရာ HS အားဖြင့်၎င်း, သုတေသနရပ်ကွက်အတွင်းရှိဝန်ထမ်း nursing ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲပါဝင်သည်။
ပါဝင်သူတစ် ဦး သည်အမိုင်နိုအက်စစ်သောက်ခြင်းကိုမလိုက်နာသောကြောင့်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း ၂၈ ဦး ပါ ၀ င်သောအသက် (၁၉) နှစ်နှင့် (၄၉) နှစ်ကြားအမျိုးသား (၁၄) ယောက်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂၆ နှစ် (SEM) ဖြစ်သည် = 1.9), နှင့်အထီး, ပျမ်းမျှအားဖြင့် 29 နှစ် (SEM = 1.9) ။ ကျနော်တို့ menses ပြင်ပအားလုံးအမျိုးသမီးသင်တန်းသားများကိုစမ်းသပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပေမယ့်အချိန်တန်သတ်ခြင်းငှါ,3အမျိုးသမီးထဲက 14 ကာလအတွင်းသို့မဟုတ် menses မှမတိုင်မီသီတင်းပတ်အတွင်းဖြစ်စေစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ထို့အပွငျငါးအမျိုးသမီးစမ်းသပ်ခြင်း၏အချိန်မှာတားဆေးဆေးလုံးကိုယူပြီးခဲ့ကြသည်။ အပြည့်အဝလူဦးရေအချိုးအစားအသေးစိတျ (အဖြစ်ရိုဝိသေသလက္ခဏာများ) ယခင်ထုတ်ဝေ (ရော်ဘင်ဆင် et al အစီရင်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ 2010).
acute phenylalanine / tyrosine လျော့ကျ (APTD) လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
လက်တွေ့သုတေသနဌာနသို့မသွားမီတစ်ရက်တွင်ပရိုတင်းဓာတ်နည်းသောအစားအစာ (၂၀ ဂရမ်ပရိုတင်းထက်နည်း) ကိုလိုက်နာရန်နှင့်ည ၇ နာရီမှ စတင်၍ အစာရှောင်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများအားလုံးသည်မနက် ၉း၁၅ နာရီခန့်တွင်စမ်းသပ်နေ့၌ရောက်ရှိလာသည်။ အခြေခံသွေးကိုထုတ်ယူပြီးနောက်တွင်အမိုင်နိုအက်စစ်သောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများအတွက် TYR သောက်ခြင်းတွင် 20 g isoleucine,7g g leucine, 9.15 g g lysine, 15 g g methionine, 22.5 g g valine, 17.5 g g threonine နှင့်5g g tryptophan ပါရှိသည်။ BAL အချိုရည်တွင်အတူတူပါ ၀ င်သော်လည်း ၁၂.၅ ဂရမ် tyrosine နှင့် 17.5-g phenylalanine တို့ပါ ၀ င်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်နိမ့်ကျမှုကိုတွက်ချက်ရန်အမျိုးသမီးများသည်အမိုင်နိုအက်စစ်တစ်ခုစီ၏ ၂၀% လျော့နည်းသည်။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရေ ၃၀၀ မီလီမီတာခန့်ရှိသောရေတွင်ပျော်ဝင်သွားပြီးသောက်ခြင်းကိုပိုမိုအရသာရှိစေရန်သံပုရာအရသာကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဘာသာရပ် ၁၄ ခု (အထီး ၇ ခု) သည် TYR သောက်သုံးမှုနှင့်ကျန် ၁၄ ဦး (အမျိုးသား ၇ ဦး) သည် BAL သောက်ခြင်းကိုရရှိခဲ့သည်။ ပါ ၀ င်သူနှင့်သုတေသီနှစ် ဦး စလုံးသည်မည်သည့်သောက်စရာကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသည်ကိုမျက်စိကန်းသည်၊ သောက်သုံးပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုအခမဲ့အချိန်ပေးခဲ့သည်၊ သို့သော်သုတေသနဌာနတွင်ဆက်လက်နေထိုင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူတို့သည်ရေကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရရှိကြပြီးည ၁၂ နာရီတွင် hypoglycaemia ကိုရှောင်ရှားရန်ပန်းသီးတစ်လုံးပေးခဲ့သည်။ BAL / TYR သောက်သုံးပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၄.၅ နာရီခန့်အကြာတွင်ဒုတိယသွေးနမူနာယူပြီးအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ခြင်းပြီးဆုံးသွားသောအခါသင်တန်းသားများကိုအစာစားပြီးအိမ်ပြန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ကျနော်တို့အနေနဲ့နျဆာပသင်ယူမှုပါရာဒိုင်း (က de ကျေး et al အပေါ် BAL နှင့် TYR အုပ်စုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်။ 2007) နှင့်တစ်ဦးဂဏန်း span စမ်းသပ်မှု (Wechsler 1981) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်တန်းသားများကိုတာဝန်များကိုနှင့် crossover ဒီဇိုင်းအတွက်ခံစားချက်၏အတိုင်းအတာတစ်ခုအရေအတွက်ကလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား (တခြားနေရာရော်ဘင်ဆင် et al အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ 2010).
အဆိုပါနျဆာပသင်ယူမှုပါရာဒိုင်း Visual Basic 6.0 အတွက်ပရိုဂရမ်ခံခဲ့ရကာ Advantech Paceblade ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတင်ဆက်ခဲ့သည်။ ဆာသင်ယူမှု, ရလဒ်ကို-တန်ဖိုးစမ်းသပ်မှုနှင့်စာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်: အဆိုပါပါရာဒိုင်းအဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြားခဲ့သည်။ သင်ယူခြင်းဇာတ်စင်နှင့်ရလဒ်ကို-တန်ဖိုးစမ်းသပ်မှု (က de ကျေး et al: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်, ကြှနျုပျတို့ယခင်မြေားကိုမှစာဖတ်သူကိုရည်ညွှန်းသည်။ 2007) နှင့်စမ်းသပ်မှု (Gillan et al-of action ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ 2011) ။ အောက်ပါကဏ္ဍများအတွက်ကျနော်တို့ကဤတာဝန်များကို၏အခြေခံအင်္ဂါရပ်များကိုဖော်ပြရန် (ပုံကိုကြည့်ပါ။ 1 ) တစ်ဦးသိထားပုံဖော်တင်ဆက်ဘို့။
သုံးဇာတ်စင်ဆာပပါရာဒိုင်း၏ Greyscale ပုံဥပမာ။aသုံးယောက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအမျိုးအစားများပုံဥပမာ: စံအရတော့နှင့် incongruent ။bဆာသင်ယူမှု။ စံခွဲခြားဆက်ဆံမှုကနေဒီဥပမာထဲမှာ, သင်တန်းသားများကိုတင်ပြကြသည် ...
သူတို့နေဖြင့်အနေဖြင့်စားနပ်ရိက္ခာပစ္စည်းများစုဆောင်းနိုင်အဖြစ်ပါဝင်သူအဖြစ်အများအပြားရမှတ်ဝင်ငွေမှညွှန်ကြားခဲ့သည် ထဲမှာ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြခဲ့သည်ဆိုသောအကွက်တွင်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေး၏အစအဦးမှာတစ်ဦးတံခါးပိတ် box ကိုတစ်ဦးအစာအာဟာရကို item ၏ရုပ်ပုံနှင့်တကွ, screen ပေါ်မှာပြသခဲ့သည် ရှေ့ပေါ်။ ဤသည်အစားအစာကို item (ပုံကိုကြည့်ပါနှစ်ဦးကိုဆာပတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုညာဘက်သို့မဟုတ်လက်ဝဲ key ကိုစာနယ်ဇင်းဖြစ်စေ၏, အခြားအစားအစာကို item နှင့်ရမှတ်နှင့်အတူဆုခခြံမည်ဖြစ်ကြောင်းထားတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှု, အချက်ပြအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ 1b) ။ သင်တန်းသားများကို box ရဲ့ပြင်ပမှာခြောက်ကွဲပြားခြားနားသောအစားအစာဓါတ်ပုံတွေကိုအဘို့အနှိပ်ဖို့ရာသော့ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အမှားအားဖြင့်အထဲကရှာတွေ့ခဲ့ရသည်။ မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအစားအသောက်အတွင်းပိုင်းဆုလာဘ်များနှင့်ရမှတ်ထုတ်ဖေါ်ရန်အကွက်ကိုဖွင့်လှစ်သွားရမည်အကြောင်း, box ကိုမမှန်ကန်ကြောင်းတုံ့ပြန်မှုအောက်ပါဗလာကြီးနှင့်မျှမမှတ်ရရှိခဲ့ပြီးခဲ့ကြသည်။ ဤအဆင့်ကာလအတွင်းကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်သင်တန်းသားများကို box ရဲ့အပြင်ဘက်အပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုနှိုးဆွဘို့အနှိပ်ဖို့မှန်ကန်သောသော့ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ထားတဲ့ထို့ကြောင့်လေ့လာသင်ယူကြရတယ်။ သို့သော်သူတို့သည်လည်းဒီဂိမ်းရဲ့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွင်အရေးကြီးသောဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဖြစ်အကွက်ထဲမှာဘာအာရုံစိုက်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပိုမိုမြန်ဆန်မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှု (1 ထံမှ5ဖို့အကွာအဝေးအတွက်) ပိုပြီးမှတ်ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ရေးခြောက်လလုပ်ကွက်ပါဝင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှာခြောက်လလှုံ့ဆော်မှုများ၏တစ်ဦးချင်းစီကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်နှစ်ကြိမ်တင်ဆက်ခဲ့သည်။
(ပုံကိုကြည့်ပါ, အရတော့စံနှင့် incongruent: သင်တန်းသားများကိုသုံး bi-ခြွင်းချက်မခွဲခြားအပေါ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ 1a) ။ တစ်ဦးချင်းစီခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုအဘို့, box ရဲ့မျက်နှာစာပေါ်တဦးတည်းအစားအစာရုပ်ပုံအခြားရုပ်ပုံညာဘက်မှန်ကန်သောခဲ့ကြောင်းအချက်ပြမယ်လို့နေစဉ်လက်ဝဲတုံ့ပြန်မှု, မှန်ကန်သောခဲ့ကြောင်းအချက်ပြလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဝေဖန်, စံခွဲခြားဆက်ဆံမှုစမ်းသပ်မှုတွေတွင်, လေးခုကွဲပြားခြားနားသောအစားအစာဓာတ်ပုံများကိုလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်နှင့်ရလဒ်အဖြစ်လည်ပတ်အလုပ်လုပ်နေတယ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ box ကိုကို (စီးပွားရေးနှိုးဆွ) ၏အပြင်ဘက်အပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုအစားအစာကို item box ကို (ထိုရလဒ်ကို) အတွင်းရှိအစားအစာကို item မှတူညီခဲ့သောကွောငျ့သင်ယူခြင်းရလဒ်ကိုမလိုအပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရတော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပါဝင်သည်။ ပြောင်းပြန်ဟာ incongruent ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်တစ်ခုချင်းစီအစားအစာကို item တုံ့ပြန်မှုဆန့်ကျင်ဘို့နှိုးဆွခြင်းနှင့်ရလဒ်အဖြစ်လည်ပတ်အလုပ်လုပ်နေတယ်။ အခြားအစမ်းသပ်မှုတွေရက်နေ့တွင်, နာနတ်သီး, လက်ဝဲတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလိမ္မော်ရောင်ရလဒ်ကိုနှင့်အတူဆုခခြံမည်ဖြစ်ကြောင်းအချက်ပြတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အလုပ်လုပ်မယ်လို့အနေဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်လိမ္မော်ရောင်လှုံ့ဆော်မှု, လက်ျာတုံ့ပြန်မှုတစ်နာနတ်သီးရလဒ်ကိုနှင့်အတူဆုခခြံမည်ဖြစ်ကြောင်းအချက်ပြ။ ဒါဟာသင့်လျော်သော SR အသင်းအဖွဲ့များမှတဆင့်မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှု activation နှောင့်ယှက်သောကွောငျ့ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားသင်ယူခြင်းဟာ incongruent ရလဒ်ကိုအကြောင်းကိုမဲ့ဖြစ်စေသည်ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဥပမာမှာ, ကညာဘက်ကိုတုန့်ပြန် (SR) ကျော်လိမ္မော်ရောင်နှိုးဆွခြင်းဖြင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မယ်လို့ရရှိခဲ့ပြီးသောလက်ဝဲဘက်တုံ့ပြန်မှု (OR) နဲ့လိမ္မော်ရောင်ရလဒ်ကိုပေါင်းသင်း။ ထို့ကြောင့်, incongruent စမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည် SR အသင်းအဖွဲ့များကနေတဆင့်တစ်ခုတည်းကိုသာလေ့ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်အားကိုးသင့်တယ်။ ကျနော်တို့ယခင်လေ့လာမှုများ (က de ကျေး et al နှင့်အညီ, ဒါကြောင့်, စောငျ့ရှောကျဖို့မျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်။ 2007, 2009; Dickinson နှင့်က de ကျေး 2003), သာယခင်နှစ်ဦးကို (ဒီလည်းဖော်ပြထားတဲ့ရလဒ်ကို-တန်ဖိုးစမ်းသပ်မှုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်ထားရမည်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထောက်ခံမှုကနေအကြိုးပွုနိုငျသောကွောငျ့ကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် '' congruence အကျိုးသက်ရောက်မှု '' incongruent မှဆွေမျိုးစံနှင့်အရတော့မခွဲခြားအပေါ်သာလွန်ဖြစ်သင့်ကြောင်း ) အောက်ပါအပိုင်း၌တည်၏။ အဆိုပါ incongruent ခွဲခြားဆက်ဆံမှုထို့ကြောင့် SR အလေ့အထသင်ယူမှုတစ်အခြေခံအတိုင်းအတာနှင့်ငါတို့ကိုပေးသည်။
သင်ယူမှုအဆင့်အပြီးတွင်အဆိုပါညွှန်ကြားရလဒ်ကို-တန်ဖိုးစမ်းသပ်မှု (ပုံကိုကြည့်ပါ ro အသိပညာအကဲဖြတ်ရန်ကောက်ယူခဲ့သည်။ 1c) ။ ဒီအဆင့်မှာတော့သင်တန်းသားများကိုယခင်ကကောက်ယူခဲ့အစားအစာများပါရှိသောအရာနှစ်ခုဖွင့်လှစ်သေတ္တာများနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းအစားအစာယခင်ကညာဘက်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်လက်ဝဲနှင့်အခြားနှိပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့သည်ခဲ့သည်။ သို့သော်အစားအသောက်ပစ္စည်းများကိုတစ်ဦးကမရှိတော့မဆိုမှတ်ရကျိုးနပ်ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြပါကထိပ်ပေါ်မှာ superimposed တစ်အနီရောင်ကြက်ခြေခတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့ကိုနေဆဲ-အဖိုးတန်အစားအစာစုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုမယ်လို့သော့ချက်နှိပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါရလဒ်ကို-တန်ဖိုးဇာတ်စင်ကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်တင်ပြသုံးခုမခွဲခြား၏အသီးအသီးအဘို့အ 12 စုံစမ်းအတူ4စမ်းသပ်မှုတွေပါဝင်သည်။ စမ်းသပ်မှုအဆင့်ဆင့်စဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်မှုတုံ့ပြန်ချက်မရှိတော့ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
စာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်
ဒါကနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုဇာတ်စင် (ပုံကိုကြည့်ပါတိုက်ရိုက်လေ့နှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်မှုများအကြားချိန်ခွင်လျှာအကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ 1d) ။ ခြောက်လလုပ်ကွက်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ start မှာပုံးအတွင်းမှအားလုံးခြောက်လအစားအစာရလဒ်များမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသခဲ့ကြသည်, သို့သော်အနီရောင်ကြက်ခြေခတ်သည်ဤယခုအမှတ်အနုတ်ဦးတည်သွားစေလိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြဤနှစ်ခုအပေါ် superimposed ခဲ့သည်။ ထို့နောက်အရှေ့ဘက်အပေါ်အစာအာဟာရကိုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတံခါးပိတ် boxes တွေကိုတစ်စီးရီးလျင်မြန်စွာဆက်ခံမှာပြခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုနေဆဲ-တန်ဖိုးရှိသောရလဒ်များ (ထိုလေးရလဒ်များအသီးအသီးပိတ်ပင်တားဆီးမှုရဲ့ start မှာလက်ဝါးကပ်တိုင်မပါဘဲပြ) ပါရှိသောကြောင့်သေတ္တာများဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက်သင့်လျော်သောသော့ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ရမှတ်ဝင်ငွေ, ဒါပေမယ့်တစ်သေတ္တာတစ် now- ပါရှိသောလျှင်တုံ့ပြန်မှရှောင်ကြဉ်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည် devalued အစားအစာကို item (တစ်ဦးချင်းစီပိတ်ပင်တားဆီးမှုရဲ့ start မှာ superimposed လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်အတူပြသနှစ်ခုရလဒ်များ) ။ ခြောက်နိုင်ငံလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုချင်းစီပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှုန်းထက်လေးဆပြခဲ့ပါတယ်နှင့်လုပ်ကွက်ကိုဖြတ်ပြီး, ရလဒ်များအသီးအသီးနှစ်ကြိမ် devalued ခဲ့သည်။
ဤစစ်ဆေးမှုကတိုက်ရိုက်ဆွေမျိုးလေ့နှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်မှုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တိုက်ရိုက် SR အသင်းအဖွဲ့များကနေတဆင့်အားကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုတက်ကြွစွာ devalued ရလဒ်များနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်ကော်မရှင်အမှားများကိုဦးတည်သွားစေသင့်ပါတယ်။ ပြောင်းပြန်ရလဒ်ကိုတန်ဖိုးကို၏အခြေခံပေါ်မှာအောင်မြင်သောရွေးချယ်တားစီးသည့်နောက်ဆက်တွဲရလဒ်များ၏မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းကြီးစိုးရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်ညွှန်ပြဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဂဏန်း span စမ်းသပ်
အဆိုပါဂဏန်း span စမ်းသပ်မှု (Wechsler ၏နောက်ပြန်ဗားရှင်းမှာတော့ 1981), နံပါတ်များကျပန်းပာစမ်းသပ်နေဖြင့်ဖတ်ကြားခဲ့ကြခြင်း, သင်တန်းသားများကိုပြောင်းပြန်နိုင်ရန်အတွက်ထိုအထပ်လုပ်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါစာရင်းကိုကနဦး (သာနှစ်ခုနံပါတ်များ) အလွန်တိုတောင်းသောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်မှာတဦးတည်းအရေအတွက်ကိုတိုးမြင့်မှုအတွက်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဇာတ်စင်နှုန်းနှစ်ဦးကိုစမ်းသပ်မှုတွေအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ပြီးစီးခဲ့ပါသည်, ပထမဦးဆုံးသို့ရောက်လာသည်ကိုမဆို; သင်တန်းသားများကိုပေးထားသောဇာတ်စင်နှစ်ခုစလုံးစမ်းသပ်မှုတွေမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးပြီးနောက်ဒါမှမဟုတ်ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်တွင် (7 နံပါတ်များကိုရှည်လျားဇာတ်စင် 8) လာသောအခါစမ်းသပ်ခြင်းရပ်တန့်ခဲ့သည်။
ဒေတာအားလုံးကို SPSS ဗားရှင်း 15.0 သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့အမြဲတမ်းအကြား-ဘာသာရပ်များကျားအကြောင်းခံအချက်များနှင့် APTD (ထို BAL ဒါမှမဟုတ် TYR သောက်စရာတစ်ခုခုလက်ခံရရှိကြောင်းအုပ်စုများကိုရည်ညွှန်း) ပါဝင်သည်ထားတဲ့ကှဲလှဲ (ANOVA) ၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Bonferroni ပြင်ဆင်ချက် pairwise နှိုင်းယှဉ်ဘို့မွေးစားခဲ့သည်။ အားလုံး p-values ​​ဖန်လုံအိမ်-Geisser sphericitiy ပြင်ဆင်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, နှင့် (အားလုံးသိသာနေကြတယ်p < APTD နှင့်ကျား, မအတူ .05) Higher-အလို့ငှာ interaction ကဖော်ပြခဲ့သည်နေကြသည်။
ကျနော်တို့အရတော့နှင့် incongruent စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့မွေးရာပါကြောင်းလှုံ့ဆော်မှု-ရလဒ်ကိုရှက်ကြောက်ကင်းမဲ့သည့်စံစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်အရေးယူထိန်းချုပ်မှုအပေါ် APTD ရဲ့သက်ရောက်မှု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအာရုံစူးစိုက်။ သို့သော်ငါတို့သည်လည်းအရတော့နှင့် incongruent စမ်းသပ်မှုတွေ, စံအပေါ်ဆွေမျိုးစွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ဖို့နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုသတင်းပို့ပါ။ incongruent စမ်းသပ်မှုတွေပေါ်ကအမှန်တကယ်မဲ့ဖြစ်စေသည်စဉ်အရတော့စမ်းသပ်မှုတွေတွင်, တက်ကြွရလဒ်ကိုပြန်လည်ရယူခြင်း, မလိုအပ်သောပြန်ဆိုခဲ့သည်။ အဆုံးစွန်သောနှစ်ဦး၏ယုတ်စွမ်းဆောင်မှုတန်ဖိုးများအဘို့, ကျနော်တို့ (အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်အဆိုပါဖြည့်စွက်စားပွဲရည်ညွှန်း 1) ။ ထို့အပွငျဖြည့်စွတ် RT ကိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကိုလည်းဖြည့်စွက်ပစ္စည်း (အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည် 2).
BAL တွင်ပါ ၀ င်သူအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့် TYR အခြေအနေတစ်ခုအတွက်သွေးနမူနာများကိုမရရှိခဲ့ပါ။ ကျန်တဲ့ ၂၆ ဦး မှာ TYR နဲ့ PHE Plasma ပါဝင်မှုအချိုးအစား၊ အခြားကြီးမားတဲ့ကြားနေအမိုင်နိုအက်ဆစ်များ (LNAAs) နဲ့အခြေခံပြီး၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၄.၅ နာရီသောက်ပြီးချိန်ကိုတွက်ချက်သည်။ ဤ TYR / PHE - NALNAAs အချိုးသည် ဦး နှောက်တွင် TYR ရရှိနိုင်မှုအညွှန်းကိုဖော်ပြသည်။ ကြိုတင်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုကသိသိသာသာ APTD * အချိန်အပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခဲ့သည်။F(1,22) = 15.98, MSE = .009, p = .001) ။ အဖြစ်သများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ 2, ဦးနှောက်ထဲမှာ TYR ရရှိနိုင်မှုတို့သည် BAL သောက်နေဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ (F(1,11) = 1.53, MSE = .013), အ TYR သောက်သိသိသာသာလျှော့ချရေး (မှဦးဆောင်နေစဉ်F(1,11) = 86.26, MSE = .005, p < .0005) ။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ APTD ကုသမှု DA ရှေ့ပြေးလျှော့ချအတွက်အောငျမွငျခဲ့ကွောငျးကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
APTD ကုသမှုထဲကဓာတုပစ်စညျးသက်ရောက်မှု: ပျမ်းမျှအား TYR / ဖီ: ΣLNAAsအချိုး (နှင့် SEMs) (ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများကိုများအတွက်သီးခြားပြသနေကြသည်လက်ဝဲဘက် နှင့် လက်ျာဘက်ဂရပ်) ကို BAL နှင့် TYR အုပ်စုများအတွက် (အချည်းနှီးသော နှင့် ဖြည့်စက်), နှစ်ဦးစလုံးကို pre-သောက်စရာ (T0) နှင့် Post-သောက်စရာ ...
ဆာသင်ယူမှုအပေါ် APTD ၏ဆိုးကျိုးများ
ဂဏန်း350% အခွင့်အလမ်းအဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းနှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေး၏ခြောက်လလုပ်ကွက်စဉ်အတွင်းစံစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှုများ၏ပြသမှုရာခိုင်နှုန်း။ စံစမ်းသပ်မှုတွေတစ်ဦးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသာသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုလြှော့F(5,12)) = 14.38, MSE = 281.0, p < .0005 ။ အဆိုပါ APTD ၏အကြောင်းရင်းများကိုလည်းမကျား၏ပါဝင်သောမျှသိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများ (ရှိခဲ့သည်Fs < 1) ။ ထို့ကြောင့်, ဆာပသင်ယူမှု APTD ကြောင့်ထိခိုက်မခံခဲ့ရပါဘူး။
ဆာသင်ယူမှု: ဆာပလေ့ကျင့်ရေး၏ခြောက်လလုပ်ကွက်စဉ်အတွင်းစံစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှု (နှင့် SEMs) ၏ပျှမ်းမျှရာခိုင်နှုန်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများကိုများအတွက်သီးခြားပြသနေကြသည် (လက်ဝဲဘက် နှင့် ညာဘက် panel က) နှင့် BAL နှင့် TYR အုပ်စုများ ( ...
ယခင်လေ့လာမှုများ (က de ကျေး et al ၏အခြေခံပေါ်မှာမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း။ 2007, 2009a), ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဦးခြုံငုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (သင်တန်းသားများ incongruent ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်မှုနှုန်းမှာအရတော့နှင့်စံမခွဲခြားဝယ်ယူကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်F(2,48) = 25.86, MSE = 311.1, p < .0005) ။ တစ်ဦးကဦးအုပ်စုတစ်စုဒီ 'congruence အကျိုးသက်ရောက်မှု' (ပု BAL အုပ်စုတစ်စုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်သိသာထင်ရှားသောခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်လေ့လာဆန်းစစ်F(2,24) = 24.87, MSE = 403.0, p < .0005) နှင့် TYR အုပ်စု (F(2,24) = 8.88, MSE = 403.0, p < .05) ။ အထူးသ SR သင်ယူမှုအပေါ် APTD ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ, ငါတို့ incongruent စမ်းသပ်မှုတွေ၏သီးခြားတစ်ဦးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (APTD တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုလိုက်လျောဖို့ပျက်ကွက်F < SR သင်ယူမှုချို့ယွင်းမခံခဲ့ရကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပေး 1) ။
ro သင်ယူမှု၏ရလဒ်ကို-တန်ဖိုးစမ်းသပ်မှုအပေါ် APTD ၏ဆိုးကျိုးများ
APTD ro သင်ယူမှုမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ စံစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ဦးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ APTD (တစ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုလိုက်လျောခဲ့ပါဘူးF < 1), မတစ်ဦး APTD * ကျားအပြန်အလှန် (F < 1) ။ မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှု၏ပျမ်းမျှရာခိုင်နှုန်းဟာ BAL အုပ်စု 91% နှင့် TYR အုပ်စု 88% ရှိကြ၏။
ထို့အပြင်အရတော့နှင့် incongruent မခွဲခြားပါဝင်သည်တစ်ခုထပ်တိုးတစ်ဦးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ကသိသိသာသာသုံးလမ်း APTD * ခွဲခြားဆက်ဆံမှု * ကျားအပြန်အလှန်ထင်ရှားF(2,48) = 10.53, MSE = 450.2, p < .0005) ။ ဒီအပြန်အလှန်၏ပျက်ပြားအမျိုးသမီးများအတွက်သိသာထင်ရှားသော APTD * ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအပြန်အလှန် (ရှိကွောငျးကိုပြသF(2,24) = 10.78, MSE = 377.0, p = .001), မဟုတ်ယောက်ျားတို့အတွက် (F(2,24) = 2.25, MSE = 523.3) ။ post-hoc လွတ်လပ်သောနမူနာ t-tests (ထို TYR သောက်ပေးထားခဲ့အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများ BAL အုပ်စုသူများထက် incongruent ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအပေါ်သိသိသာသာပိုဆိုးဖျော်ဖြေမြဲမြံစွာတည်t = 4.89, p = .001), စံအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်စဉ် (t = .28) နှင့်အရတော့မခွဲခြား (t = 1.55) ကစာရင်းအင်းချွတ်စွပ်အရွယ်အစားဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပွငျ incongruent စွမ်းဆောင်ရည် (ထို TYR အုပ်စုတွင်အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များအဘို့အပင်သိသိသာသာအခွင့်အလမ်းအဆင့်အထိကိုအောက်တွင်ခဲ့သည်t = 4.89, p = ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူထိန်းချုပ်မှုဆန့်ကျင်အဖြစ် SR အလေ့အထအပေါ်မှီခိုအကြံပြုခြင်း .001) ။ နိဂုံးချုပ်မှာတော့ရလဒ်-တန်ဖိုးစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုဘာမှ, အမျိုးသမီးအတွက်လေ့ထိန်းချုပ်မှုကိုခိုင်ခံ့စေလျှင် APTD, ro သင်ယူမှုအယှက်, ဒါပေမယ့်မပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါစာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်မှုအတွက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်လေ့ထိန်းချုပ်မှုများအကြားချိန်ခွင်လျှာအပေါ် APTD ၏ဆိုးကျိုးများ
လုပ်ဆောင်ချက်စာရွက်များ၏ဖြစ်ပျက်မှုအပေါ် APTD ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကျနော်တို့ရလဒ်များ devalued ထားတဲ့အပေါ်တန်ဖိုးရှိသောရလဒ်များစမ်းသပ်မှုတွေနှိုင်းယှဉ်မရရှိနိုင်ဖြစ်အချက်ပြခဲ့ပြီးသောအပေါ်စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အသီးခြားစီလုပ်တုံ့ပြန်မှုများ၏ရာခိုင်နှုန်း (စမ်းသပ်မှုတွေ * 100 ၏ / number ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏တုံ့ပြန်မှု၏နံပါတ်) တွက်ချက် ရရှိနိုင်ဖြစ်အချက်ပြခဲ့သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောစွမ်းဆောင်ရည် devalued ရလဒ်များဆီသို့ဦးတည်တန်ဖိုးရှိသောရလဒ်များနှင့် 100% ဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန် 0% ပါလိမ့်မယ်။
အဖြစ်သများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ 4, စံစွမ်းဆောင်ရည်ဟာအပေါ်စာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်ပြင်းထန်စွာသာအမျိုးသမီးအတွက် APTD အားဖြင့်နှောင့်အယှက်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာရေးနှင့်အညီ, တစ်ဦးဦးစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ကသိသိသာသာ APTD * တန်ဖိုး * ကျားအပြန်အလှန်လြှော့F(1,24) = 5.67, MSE = 544.2, p < .05) ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဖျော်ဖြေပွဲ၏သီးခြားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (အမျိုးသမီးတစ်ဦးသိသိသာသာ APTD * တန်ဖိုးအပြန်အလှန်ရှိကွောငျးကိုအတည်ပြုခဲ့သည်F(1,12) = 13.07, MSE = 378.0, p < .005), မဟုတ်ယောက်ျားအတွက် (F < 1) ။ post-hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအမျိုးသမီးသင်တန်းသားများ၏ (တန်ဖိုးရှိသောရလဒ်များဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန်ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်းထင်ရှားF(1,12) = 1.24, MSE = 248.1, p < .05), ဒါပေမယ့် APTD devalued ရလဒ်များ (ဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန်မှုနှိမ်နိုင်စွမ်းနှောင့်အယှက်F(1,12) = 12.11, MSE = 553.4, p < .005) ။
စာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်: တန်ဖိုးရလဒ်များနှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးရှိသောရလဒ်များဆီသို့ဦးတည်ပျမ်းမျှအားတုံ့ပြန်၏ရာခိုင်နှုန်း (နှင့် SEMs) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများကိုများအတွက်သီးခြားပြသကြသည်, ထိုအတွက် လက်ဝဲဘက် နှင့် လက်ျာဘက်ဂရပ်များအသီးသီး
အဆိုပါအတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအမျိုးအစားနှင့်အတူတစ်ဦးအပိုဆောင်းတစ်ဦးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ကသိသိသာသာခွဲခြားဆက်ဆံမှု * တန်ဖိုးအပြန်အလှန်လြှော့F(2,48) = 15.61, MSE = 305.5, p < .0005) ။ သီးခြား Post-hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတန်ဖိုးကသာသိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှားသည့်အရတော့စမ်းသပ်မှုတွေ၏ (သွားရမည်အကြောင်းF(1,24) = 216.2, MSE = 263.9, p < ကျွန်တော်တို့ဟာစံစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အစီရင်ခံအဖြစ် .0005), incongruent စွမ်းဆောင်ရည် (အတူတူပင်သုံးလမ်းတန်ဖိုး * APTD * ကျားအပြန်အလှန်ထင်ရှားF(1,24) = 7.54, MSE = 889.0, p = .01) ။ APTD (သာအမျိုးသမီးသင်တန်းသားများအတွက်အနုတ်လက္ခဏာ incongruent စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်F(1,12) = 9.90, MSE = 550.4, p < .01) ။ ထို့ကြောင့်, အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ချက်စာရွက်များပေါ်တွင် APTD များ၏ထိခိုက်သက်ရောက်မှုအထူးသမှုကြောင့်အောင်မြင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိနိုင်ရလဒ်ကိုနှင့်၎င်း၏လက်ရှိတန်ဖိုးကိုကျလာသောနိုင်စွမ်းလိုအပ်သောအရာပေါ်စံနှင့် incongruent စမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်နှောင့်အယှက်စွမ်းဆောင်ရည်, ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဆနျ့ကငျြ, စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတုံ့ပြန်သို့မဟုတ်မပေးရန်ဆုံးဖြတ်ချက်တိုက်ရိုက်သေတ္တာများ၏ရှေ့အပေါ်တင်ပြခဲ့ကြသည်သောလှုံ့ဆော်မှု၏တန်ဖိုးအပေါ်အခြေခံပြီးနိုင်သည့်အပေါ်အရတော့စမ်းသပ်မှုတွေပေါ်တွင်နဂိုအတိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, APTD ရွေးချယ်ယေဘုယျအားဖြင့်တုံ့ပြန်မှုနှိမ်ဖို့အမျိုးသမီး '' စွမ်းရည်များကိုဖျက်ပယ်ခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အစားမျှော်လင့်ရလဒ်ကိုတန်ဖိုးအပေါ် အခြေခံ. အထူးထိခိုက်နစ်နာတုံ့ပြန်မှုတားစီး။
အမျိုးသမီးအတွက် menses အခြေအနေနှင့်ဓတေားအဘို့အထိန်းချုပ်ခြင်း
APTD ၏အမျိုးသမီး-တိကျတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် gonodal ဟော်မုန်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအနာဂတ်သုတေသနအတွက် elucidated ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျနော်တို့အကြား-ဘာသာရပ်များ3ထွက်နှင့်အတူ (menses status ကိုဆခွဲကိန်းနှင့်အတူ Post-hoc ပို့ချခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်း၏အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသမီးပါဝင်သူများ၏ menses status ကိုထိန်းချုပ်ဖို့တစ်ဦးပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုဟာစာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်မှုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်လေ့လာဆန်းစစ်ရာ၌ခန့်ထားပြီ 14 အမျိုးသမီး၏) ကြိုတင် menses မှတစ်ပတ်ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခံတော်မူပြီးမှ။ ဟော်မုန်းစည်းမျဉ်းလည်းတားဆေးဆေးလုံး၏အသုံးပြုမှုကြောင့်ထိခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အပိုဆောင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (5 အမျိုးသမီးထဲက 14 စမ်းသပ်ခြင်း၏အချိန်မှာဆေးလုံးအပေါ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ) ဒီအချက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဤအပိုဆောင်းစမ်းသပ်မှုမှာစာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်မှု၏စံစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် APTD ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (Fs ကို (1,10) = 12.05 နှင့် 8.66, MSEs = 409.5 နှင့် 406.0, ps < .01) နှင့် incongruent စမ်းသပ်မှုတွေ (Fs ကို (1,10) = 5.37 နှင့် 8.66, MSEs = 541.9 နှင့် 603.8, ps < .05) ကြံ့ခိုင်ဖြစ်သက်သေပြနှင့် (menses status ကိုအတူမဟုတ်သလိုဆေးလုံးအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘူးFs < 1) ။
အကဲဖြတ်အဖြစ်ကျနော်တို့စာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်မှု (တန်ဖိုးရှိသောအနုတ် devalued ရလဒ်များဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန်တဲ့ခြားနားချက်ရမှတ်တွင်ထင်ဟပ်ကဲ့သို့) တိုက်ရိုက် Post-သောက် DA ရရှိနိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည် (စံစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်ရှိမရှိစွမ်းဆောင်ရည်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တစ်ခုတစ်ဦး Spearman ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကောက်ယူ ) TYRPHE / LNAAs အချိုး၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ DA ရရှိနိုင်မှုအထီးပါဝင်သူ (Rho အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်စာရွက်များကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ပျက်ကွက်သွားရမည်အကြောင်း = -.11, p = .7), အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများအတွက် DA ရရှိနိုင်မှုအတွက်စာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်မှု (Rho အတွက်လက်ရှိရလဒ်ကိုတန်ဖိုးကိုအပေါ်တုံ့ပြန်ဆာအခြေခံနိုင်စွမ်းနှင့်အတူအပြုသဘောနှင့်သိသိသာသာဆက်နွယ်နေကြောင်း = .58, p < .05) ။ ဤရလဒ်သည်စူးရှသော APTD လေ့တုံ့ပြန်ဆီသို့ဦးတည်ချိန်ခွင်လျှာ Tipping အတူရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်လေ့ထိန်းချုပ်မှုများအကြားချိန်ခွင်လျှာအဆုံးအဖြတ်အတွက် DA တစ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ထပ်မံပံ့ပိုးကူညီမှုပေး။
အလုပ်လုပ် memory နဲ့အသက်အရွယ်
ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူမှုအပေါ် APTD ရဲ့ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများတဲ့အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းကကမကထပြုခဲ့သောဖြစ်နိုင်ခြေဖယ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ဂဏန်း span တာဝန်အပေါ်နောက်ပြန်ရမှတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ တစ်ဦးကဦးစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ထို TYR နှင့် BAL အုပ်စုများကဒီအလုပ်တစ်ခုကိုအပေါ်အညီအမျှကောင်းစွာဖျော်ဖြေအတည်ပြုF < 1 (SEMs တစ်ဦးတန်းတူပျှမ်းမျှရမှတ်နှင့်အတူ 9.1), = အသီးသီး 0.6 နှင့် 0.8,) ။ ထို့အပြင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများကို (အညီအမျှကောင်းစွာခြုံငုံဖျော်ဖြေF < 1 နှင့် 8.7 (SEMs ၏ပျှမ်းမျှရမှတ်များနှင့်အတူ 9.5), = အသီးသီး 0.6 နှင့် 0.8,) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဘယ်သူမျှမ APTD * ကျားအပြန်အလှန် (ရှိခဲ့F(1,24) = 1.47, MSE = 7.000) ။ ထို့ကြောင့်, Over-မှီခိုအလေ့အထအပေါ် APTD အောက်မှာရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ဆောင်ချက်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်တစ်ဦးထိခိုက်သက်ရောက်မှုကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့ပေါ်လာပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းသားများကိုအသက်အရွယ်အတွက်ကွဲပြားဒါကြောင့်ကျနော်တို့အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု APTD ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအဘို့မှတ်ကြောင်းထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့ဆင်တူဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ (ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများကိုအသက်အရွယ်အတွက်သိသိသာသာကွာခြားမထူထောင်F < 1), မဟုတ်သလိုအဲဒီမှာ APTD ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (ခဲ့သည်F < 1) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကျား * APTD အပြန်အလှန် (ရှိခဲ့F < 1) ။
APTD မှတဆင့် DA အဆင့်ဆင့်လျှော့ချအထီးသင်တန်းသားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေပေမယ့်အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများအတွက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လေ့ဆွေမျိုးမျက်နှာသာမပေးခဲ့ပါဘူး။ APTD သင့်လျော်သောတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့လှုံ့ဆော်မှုပေါင်းသင်းဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအယှက်မတုန့်ပြန်-ရလဒ်ကိုဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ပါဘူးနေစဉ်, APTD အဆိုပါစာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်မှုအပေါ်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှောင့်အယှက်ပြုလေ၏။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအချက်ပြရလဒ်ကို၏လက်ရှိတန်ဖိုးကိုအပေါ်တုံ့ပြန်အခြေခံရန်လိုအပ်ခံရတဲ့အခါပိုများသောအထူးသသည်, စာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်မှု၏စံများနှင့် incongruent စမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်သူတို့ devalued ရလဒ်များဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန်မှုနှိမ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ DA ရရှိနိုင်မှုကဒီစမ်းသပ်မှုအပေါ်ဆွေမျိုးရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်း။
ဒီလေ့လာမှုက APTD မှတဆင့် putative DA ကွယ်ပျောက်သွားလေ့အရေးယူထိန်းချုပ်မှုမှဂိုးညွှန်ကြားထံမှချိန်ခွင်လျှာပြောင်းရွှေ့ရသည်ကြောင်းပြသသည်။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုသာအမျိုးသမီးအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်များနှင့် DA ရရှိနိုင်မှုတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကျဉ်းချုံးအကျဉ်းချုပ်ရန်, ကနဦးသင်ယူမှုဇာတ်စင်အတွက် APTD ဆာပရွေးချယ်မှုလမ်းပြခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှုကိုအသုံးပြုရန်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်, SR သင်ယူမှုချို့ယွင်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ နောက်ဆက်တွဲရလဒ်-တန်ဖိုးစမ်းသပ်မှု၏စံစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်အောင်မြင်သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ထင်ဟပ်အဖြစ် ro သင်ယူမှုလည်းနဂိုအတိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် APTD incongruent စမ်းသပ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်သိသိသာသာအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေ၏ဤအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ပေါ်အောက်တွင်-အခွင့်အလမ်းစွမ်းဆောင်ရည် APTD SR အသင်းအဖွဲ့များအပေါ်မှီခိုပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်ဆိုကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် APTD, ဘာမှသည်မှန်လျှင်, ပိုမိုအားကောင်းလေ့ထိန်းချုပ်မှုမှဦးဆောင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများနှင့် SR အလေ့အထများကို 'စာရွက်များ-of action ကို' 'စမ်းသပ်မှုများတွင်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်သို့ဆောင်ခဲ့ကြသောအခါအမှန်စင်စစ်, ငါတို့သည်အမျိုးသမီးရွေးချယ် devalued ရလဒ်များမှဦးဆောင်ကြောင်းတုံ့ပြန်မှုတားစီးရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ APTD ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ဆောင်ချက်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ SR အလေ့အထအပေါ်မှီခိုအားထားရန်ဦးဆောင်သည်ဟုတင်ပြသည်။
ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များနှင့်အလေ့အထများအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို
APTD မှတဆင့် DA အဆင့်ဆင့်လျှော့ချတုံ့ပြန်လေ့ဆီသို့ဦးတည်ချိန်ခွင်လျှာပြောင်းရွှေ့ရသည်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့၏နိဂုံးချုပ်ယခင်လေ့လာမှုနှင့်အတူပေုံပဋိပက္ခ၌တည်ရှိ၏ (Faure et al ။ 2005), ကြွက်များတွင် nigrostriatal လမ်းကြောင်း၏ 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကျယ်ပြန့်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူအလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးနှောင့်အယှက်ကြောင်းသရုပ်ပြရာ။ သို့သော်လက်ရှိလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကျယ်ပြန့်အလေ့အကျင့်၏အကျိုးသက်ရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစား, ငါတို့ APTD ထိရောက်သောဖြစ်သည့်အတွင်းအတော်လေးအကျဉ်းအချိန်ပြတင်းပေါက်အတွင်းဆွေမျိုးရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်လေ့ထိန်းချုပ်မှုလေ့လာခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ပါရာဒိုင်းချမှတ်ခဲ့သေးသည်။ အနာဂတ်သုတေသနလူသား, တိရိစ္ဆာန်၌ရှိသကဲ့သို့, အနိမ့် DA အဆင့်ဆင့် Over-သင်တန်း (Wickens et al ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်အမူအကျင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တားဆီးရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ 2007).
ငါတို့သည်လည်း Faure နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအထူး nigrostriatal လမ်းကြောင်းပစ်မှတ်ထားကြောင်းသတိပြုပါသင့်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူ ventral striatum နှင့် ventromedial prefrontal cortex ပါဝငျသောအပြိုင်လမ်းကြောင်းအားဖြင့် subserved ခံရဖို့ပုံပေါ်နေချိန်တွင်ဤသည်လမ်းကြောင်းယခင်က, အလေ့အထဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့သုတေသနနှစ်ဦးစလုံးမှဤ Dual-system ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာဗိသုကာများအတွက်အထောက်အထား, DA ထိခိုက်ထားတဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်လမ်းကြောင်း၏အရေးပါမှုကိုထောက်ပြသည် (Balleine နှင့် O'Doherty 2010) ။ အမှန်မှာထို ventral corticostriatal ဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင် DA function ကိုရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူမှုနှင့်ရလဒ်ကိုခန့်မှန်း (ရူ့ et al အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ 2007; နေ့နှင့် Carelli 2007; Hitchcott et al ။ 2007; Hollerman et al ။ 2000; Pessiglione et al ။ 2006; Schultz 1998; တေလာ et al ။ 2007; Waelti et al ။ 2001) ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုမှာ APTD ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကဒီ ventral corticostriatal ဆားကစ် (McLean et al အတွက် DA လျော့ကျကကမကထပြုခဲ့ခဲ့။ ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် 2004), နှင့် APTD Over-မှီခို SR သင်ယူမှုအပေါ်ဦးတည်လုသောငါတို့တွေ့ရှိချက် DA function ကိုသို့သုတေသနပြု lesioning ယခင်တိရစ္ဆာန်နှင့်ပဋိပက္ခအတွက်သေချာပေါက်ထို့ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ အနာဂတ်သုတေသနကဤ corticostriatal လမ်းကြောင်း (Leyton et al အတွက် DA neurotransmission လျှော့ချအတွက် APTD ၏ဆွေမျိုးထိရောက်မှုဆုံးဖြတ်ရန်ပေ၏ technique ကိုချမှတ်လိမ့်မည်။ 2004; Montgomery et al ။ 2003).
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ APTD ဖွယ်ရှိ Faure et al ။ ရဲ့လေ့လာမှု၏ 6-OHDA ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ထက်လူသားများအတွက်သိသိသာသာလျော့နည်း DA လျော့ကျ (မှဦးဆောင်2005), nigrostriatal DA ၏ကြွက်များတွင်တစ်ခုနီးပါးပြည့်စုံတွေပျက်စီးမှုရှိခဲ့သည်ရှိရာ။ ဒါကြောင့်လူသားတွေအတွက်အလားတူလေးနက်တဲ့လျော့ကျ Faure နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်ဆင်တူသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုမယ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် striatal DA အလွန်စိတ်မချရသောပါကင်ဆန်ရောဂါသို့မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုအတွက်, ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာပပါရာဒိုင်း (က de ကျေး et al သုံးပြီးသင်ယူ SR အလေ့အထတစ်ခုလိုငွေပြမှုအဘို့သက်သေအထောက်အထားရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပေ။ 2011).
ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဒေသများတွင် APTD ရဲ့ထိရောက်မှု, ပစ္စုပ္ပန်မှာအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်သည်မဟုတ်နေစဉ်, အဲဒါကိုအဓိကအား DA အဆင့်ဆင့်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းပေါ်လာပါဘူး။ tyrosine ကိုလည်းဖြစ်သော်လည်း noradrenaline, ယခင်တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့သုတေသနများအတွက်ရှေ့ပြေး APTD (ရွေးချယ် McTavish et al DA ထိခိုက်စေသော။ ညွှန်ပြ 1999a, b; Sheehan et al ။ 1996).
ပထမတစ်ချက်မှာကစာရွက်များ-of action ကိုစမ်းသပ်မှုအပေါ်ချို့ယွင်းစွမ်းဆောင်မှုကြောင့်အထွေထွေ inhibitory လိုငွေပြမှုမှပါပြီနိုင်ပုံမပေါ်ပေမည်။ DA (လင်းယုန် et al ဆန့်ကျင်အဖြစ်သို့သော်လည်းတုံ့ပြန်မှုတားစီးသို့ယခင်သုတေသနအဓိကအား serotonergic နှင့် noradrenergic စနစ်များ implicates ။ 2008) ။ ထို့အပြင်တက်ရောက်လာသူများကိုရိုးရှင်းစွာနှိုးဆွဝိသေသလက္ခဏာများ၏အခြေခံပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုနှိမ်နိုင်သည့်အပေါ်အရတော့စမ်းသပ်စမ်းသပ်မှုတွေပေါ်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်, ချို့ယွင်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဲဒီအစား, APTD ရွေးချယ်တားစီးပြင်းထန်စွာတိကျစွာအဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်အချက်ပြခဲ့ရလဒ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းပေါ်မူတည်သည့်အပေါ်စံနှုန်းနှင့်အ incongruent စမ်းသပ်မှုတွေပေါ်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူအထူးဝငျရောကျစှကျ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ချို့ယွင်းစွမ်းဆောင်ရည်အထွေထွေအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှုကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့ပေါ်လာခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါဂဏန်း span စမ်းသပ်မှု (ထာ et al နှင့်အတူအကဲဖြတ်အဖြစ်ယခင်သုတေသနနှင့်အညီ, APTD အလုပ်လုပ်မှတ်ဥာဏ်မထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ 2005) ။ ဒါကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက် APTD သည့် SR အလေ့အထ system ပေါ်တွင်အပ်နှင်းခံရအပြုအမူကျော် သာ. ကြီးမြတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ, အထူးသတဲ့ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထုံးစံ၌လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားလျော့ကြောင်းပေါ်လာသည်။
မိန်းမတွေကယောက်ျားထက် APTD များ၏နှောင့်အယှက်ဆိုးကျိုးများပိုမိုထိခိုက်မခံခဲ့ကြသည်။ ယခင်စာပမြေားကိုလညျး APTD ကုသမှု (ဥပမာ Munafo et al အောက်ပါသိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကျားမကွဲပြားမှုမှာထောက်ပြကြသည်။ 2007; ရော်ဘင်ဆင် et al ။ 2010) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ, အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဆေးညွှန်းနိမ့်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်မှချိန်ညှိခဲ့ကြသည်အဖြစ်ဒီ APTD ကုသမှုထိရောက်မှု differential ကြောင့်ခဲ့တာမဖြစ်နိုင်ပုံပေါ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤကျားခြားနားချက်၏အခြေခံအမျိုးသမီး Laakso et al (ယောက်ျားထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား striatal DA ပေါင်းစပ်စွမ်းရည်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 2002; Haaxma et al ။ 2007).
ကျနော်တို့တားဆေးဆေးလုံး၏ရာသီစက်ဝန်းနှင့်အသုံးပြုမှု DA စည်းမျဉ်းများနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်အချက်များဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြသင့်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ဒီဇိုင်းမခံခဲ့ရပေမယ့်, ငါတို့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတွင်ဤ variable တွေကိုများ၏ပါဝင်မှု APTD ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်အမျိုးသမီး-တိကျတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လိုငွေပြမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်မထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီကျားမခြားနားချက်ကိုထူထောင်ပြီးမှ, အနာဂတ်သုတေသနနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သင့်တယ်, သိပ်လေ့, action ကိုထိန်းချုပ်မှုအပေါ် dopamine လျှော့ချရေး၏ဆိုးကျိုးများအပေါ် gonadal ဟော်မုန်း၏အခန်းကဏ္ဍလျစ်လျူရှု။
psychopathologies အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို
ဒါဟာ APTD များ၏နှောင့်အယှက်သက်ရောက်မှုမှအမျိုးသမီး '' sensitivity ကို DA ဂီယာ (Cahill ၏ပွောငျးလဲပါဝင်ကြောင်း psychopathologies မှအားနည်းချက် differential ဆက်စပ်ကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင် 2006; Seeman 1997; Wetherington 2007) ။ DA များ၏အလှူငွေ elucidated ခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲပေမယ့်အများအပြားကကျား, မကွဲပြားမှု, ထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူပါဝင်ကြောင်း psychopathologies အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မကြာသေးမီ epidemiological သုတေသနဦးပထမဦးဆုံးအချိန်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းတွင်အောက်ပါ, အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ (O 'Brien နှင့်အန်တိုနီထက်မူးယစ်ဆေးအပေါ်မှီခိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းအကြံပြု 2005), နှင့်တိရစ္ဆာန်သုတေသနကိုလည်း (အမျိုးသမီးအတွက် သာ. ကြီးမြတ်အားနည်းချက်မှထောက်ပြ Lynch 2006; Roth နဲ့ကာရိုး 2004) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် DA ကွယ်ပျောက်သွားလည်း (က de ကျေး et al ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်လေ့အပြုအမူများအကြားချိန်ခွင်လျှာကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ 2011) ။ အမျိုးသမီးထက်ယောက်ျား၌ဤရောဂါပိုမိုအားနည်းချက် Haaxma et al (အမျိုးသမီးအတွက်ပိုမိုမြင့်မား striatal DA အဆင့်ဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ခံရဖို့ hypothesised ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2007) ။ တစ်ဦးကထပ်မံကျား, မမခွဲခြားလည်း (ဆေး PD လူနာထိန်းချုပ်မှုမမှန် impulse မှအားနည်းချက်အတွက် Giladi et al လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်။ 2007) ။ စဉ်းစားစတိုင်များ depressive ဖို့နဲ့သဘောထားတွေကို (Strauss et al ruminative ဖို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသမီး '' အားနည်းချက်။ 1997) တစ်ဦးကိုစိတ်အလိုအလျှောက်ပိုမိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်အဖြစ်အပြင် action ကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ နိဂုံးချုပ်မှာတော့ DA-မှီခို psychopathologies မှလွယ်ကူစွာထိခိုက်အတွက်ကျားမကွဲပြားမှုမှ DA များ၏အလှူငွေရှင်းလင်းစွာထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးအချက်ကိုခိုင်လုံမှု။
ကျနော်တို့ APTD များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံ, အစားအသောက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို အသုံးပြု. လူသားများအတွက်လေ့နှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားချိန်ခွင်လျှာအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ DA ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏ပထမဦးဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြ။ W ကအီး APTD SR နှင့်အတူမဟုတ်သလို ro သင်ယူမှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မထားဘူးကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုပေး။ သို့သော် APTD ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ဆောင်ချက်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာတုံ့ပြန်လေ့အပေါ်မှီခိုဆီသို့ဦးတည်ချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲမှပေါ်လာပါဘူး။ APTD ၏ဤထိခိုက်သက်ရောက်မှုအမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းဖို့ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ အနာဂတ်သုတေသနလေ့နှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ၏ dopaminergic စည်းမျဉ်း၌ဤကျားခြားနားချက်ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုတိုးတက်စေရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဤအလုပ်ကိုကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ရှိအမူအကျင့်များနှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံအင်စတီကျုကထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီနှင့် Wellcome Trust မှပူးတွဲချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလေ့လာမှုအတွက်နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေများကို Well Robot Trust Program Grant 076274 / Z / 04 / Z မှရရှိသည်။ TW Robbins၊ BJ Everitt, AC Roberts နှင့် BJ Sahakian OJS de Wit တို့အားနယ်သာလန်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့၊ NWO မှထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ သိမှုသိပ္ပံစင်တာအမ်စတာဒမ် - ဦး နှောက်နှင့်သိမှတ်မှုအစီအစဉ်။ OJ ရော်ဘင်ဆင်ကို MRC PhD ပညာသင်ဆုဖြင့်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး EE DeVito ကို Pinsent Darwin ပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသား၊ T32 AA015496 (Petrakis, PI) မှ NIAAA နှင့် K12 DA031050 (Mazure, PI) မှ NIDA မှထောက်ခံခဲ့သည် (မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်) စာရေးသူ၏တာဝန်နှင့် NIDA (သို့) NIH ၏တရားဝင်အမြင်များကိုသေချာပေါက်ကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ။ Wellcome Trust Clinical Research Facility (Addenbrooke's Hospital, Cambridge, UK) ရှိသူနာပြုများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများအားအမိုင်နိုအက်ဆစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ပါ ၀ င်သူအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ပရိုဂရမ်ထောက်ပံ့မှုအတွက် Tarik Barri အားကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Agid Y ကို, Ruberg M က, Javoy-Agid က F, Hirsch ကအီး, et al Raisman-Vozari R ကို, Vyas S က။ dopaminergic အာရုံခံပါကင်ဆန်ရောဂါမှရွေးချယ်အားနည်းချက်ဖြစ်ပါသလား Adv Neurol ။ 1993; 60: 148-164 ။ [PubMed]
Balleine BW, O'Doherty JP ။ အရေးယူထိန်းချုပ်လူ့ခြင်းနှင့်ကြွက် homologies: ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်လေ့လုပ်ဆောင်ချက် corticostriatal ပြဌာန်းခွင့်။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35 (1): 48-69 ။ Doi: 10.1038 / npp.2009.131 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဘီးလင်း: D, Everitt BJ ။ အလေ့အထများကိုရှာကြံကင်းသည့် dorsal striatum အတူ ventral ချိတ်ဆက် dopamine-မှီခိုအမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်မှုအပေါ်မူတည်နေသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 57 (3): 432-441 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2007.12.019 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
neuroscience များအတွက် Cahill အယ်လ်အဘယ်ကြောင့်လိင်ကိစ္စရပ်များ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2006;7(6): 477-484 ။ Doi: 10.1038 / nrn1909 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရူ့ JF, Aragona BJ, Heien ML, Seipel ကို AT, Carelli RM, Wightman RM ။ ညှိနှိုင်း accumbal dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု drive ကိုရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2007; 54 (2): 237-244 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2007.03.021 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
နေ့ JJ, Carelli RM ။ အဆိုပါနျူကလိယ accumbens နှင့် Pavlovian ဆုလာဘ်သင်ယူမှု။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 2007; 13 (2): 148-159 ။ Doi: 10.1177 / 1073858406295854 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖြတ်ထိုးဉာဏ်က S, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူများ Dickinson အေ Associative သီအိုရီ: တိရိစ္ဆာန်-လူ့ Translational မော်ဒယ်များများအတွက်အမှု။ Psychol Res ။ 2009; 73 (4): 463-476 ။ Doi: 10.1007 / s00426-009-0230-6 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖြတ်ထိုးဉာဏ်က S, Niry: D, Wariyar R ကို, Aitken MRF, Dickinson အေ stimulus-ရလဒ်ကို interaction ကကြွက်နှင့်လူသားခြင်းဖြင့်ခြွင်းချက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုသင်ယူမှုကာလအတွင်း။ J ကို Exp Psychol Animation ပြုမူနေ Process ကို။ 2007; 33 (1): 1-11 ။ Doi: 10.1037 / 0097-7403.33.1.1 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖြတ်ထိုးဉာဏ်က S, Corlett PR စနစ်, Aitken MR, Dickinson တစ်ဦးက, ဖလက်ချာကို PC ။ ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားနှင့်လူသားတွေအတွက်အစားအစာဓာတ်ပုံများကိုဆီသို့လေ့အပြုအမူအားဖြင့် ventromedial prefrontal cortex ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု Differential ။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29 (36): 11330-11338 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1639-09.2009 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖြတ်ထိုးဉာဏ်က S, Barker RA, Dickinson T က, Cool R. လေ့ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2011; 23 (5): 1218-1229 ။ Doi: 10.1162 / jocn.2010.21514 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dickinson အေလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အလေ့အထများ: အပြုအမူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc B-Biol သိပ္ပံ။ 1985; 308: 67-78 ။ Doi: 10.1098 / rstb.1985.0010 ။ [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dickinson တစ်ဦးက, ကျေးအက်စ်ဆာပသင်ယူမှုစဉ်အတွင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ရလဒ်အကြားအပြန်အလှန်။ QJ Exp Psychol ။ 2003; 56B (1): 127-139 ။ [PubMed]
ဒူဘွာ B, Pilon B, Lhermitte က F, ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Agid Y. Cholinergic ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်တိုကျရိုကျကမောက်ကမဖြစ်မှု။ အမ်း Neurol ။ 1990; 28 (2): 117-121 ။ Doi: 10.1002 / ana.410280202 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လင်းယုန် DM, Bari ကတစ်ဦး, Robbins TW ။ အဆိုပါမှတ်တိုင်-signal ကိုသွား / မသွားရအလုပ်များကို Cross-မျိုးစိတ်ဘာသာပြန်ချက်: action ကိုတားစီး၏ neuropsychopharmacology ။ Psychopharmacology (Berl) 2008; 199 (3): 439-456 ။ Doi: 10.1007 / s00213-008-1127-6 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Everitt BJ, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှမလှူရန်။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8 (11): 1481-1489 ။ Doi: 10.1038 / nn1579 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Everitt BJ, Dickinson တစ်ဦးက, Robbins TW ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ၏ neuropsychological အခြေခံ။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 2001; 36 (2-3): 129-138 ။ Doi: 10.1016 / S0165-0173 (01) 00088-1 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Faure တစ်ဦးက, Haberland ဦး, အခြေအနေက F, အယ်လ် Massioui N. ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အဆိုပါ nigrostriatal dopamine စနစ်လှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုအလေ့အထဖွဲ့စည်းရေး disrupts ။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25 (11): 2771-2780 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3894-04.2005 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖရန့် GK, Bailer UF, et al ဟင်နရီ SE, Drevets W က, Meltzer CC ကို, စျေး JC ။ positron ထုတ်လွှတ် tomography ဖြင့်တိုင်းတာ anorexia nervosa ကနေပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက် binding နှင့် [2c] raclopride dopamine D3 / D11 အဲဒီ receptor တိုးတက်လာခဲ့သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 58 (11): 908-912 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2005.05.003 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Giladi N ကို, Weitzman N ကို, Schreiber က S, Shabtai H ကို, Peretz C. နယူးစတင်ခြင်းအကျိုးစီးပွားကြီးထွားသို့မဟုတ်လောင်းကစားဝိုင်း, စျေးဝယ်စားသို့မဟုတ်ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်မောင်း: မော်တာလက္ခဏာတွေမှာ dopamine agonist ကုသမှုနှင့်အသက်အရွယ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုစတင်ခြင်း။ J ကို Psychopharmacol ။ 2007; 21 (5): 501-506 ။ Doi: 10.1177 / 0269881106073109 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gillan CM, Papmeyer M က, Morein-Zamir S က, Sahakian BJ, Fineberg NA, Robbins TW, et al ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်သင်ယူမှုရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူနှင့်အလေ့အကျင့်များအကြားချိန်ခွင်လျှာအတွက်နှောင့်အယှက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011; 168 (7): 718-726 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.2011.10071062 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
goto Y ကိုရေ့ AA ကို။ နျူကလိယ၏ limbic နှင့် cortical drive ကို၏ Dopaminergic မော်ဂျူရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက် accumbens ။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8 (6): 805-812 ။ Doi: 10.1038 / nn1471 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Graybiel လေး, Rauch SL ။ obsessive-compulsive ရောဂါတစ် neurobiology ဆီသို့။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2000; 28 (2): 343-347 ။ Doi: 10.1016 / S0896-6273 (00) 00113-6 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Haaxma, CA, Bloem BR, Borm gf, Oyen WJ, Leenders KL, Eshuis S က, et al ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို Neurol Neurosurg စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 78 (8): 819-824 ။ Doi: 10.1136 / jnnp.2006.103788 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Harmer CJ, McTavish SF, Clark က L ကို, Goodwin က GM က, Cowen PJ ။ tyrosine လျော့ကျကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် dopamine function ကို attenuates ။ Psychopharmacology (Berl) 2001; 154 (1): 105-111 ။ Doi: 10.1007 / s002130000613 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hitchcott PK, Quinn JJ, တေလာ JR ။ prefrontal cortical dopamine နေဖြင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကို Bidirectional မော်ဂျူ။ Cereb Cortex ။ 2007; 17 (12): 2820-2827 ။ Doi: 10.1093 / cercor / bhm010 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hollerman JR, Tremblay L ကို, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက် Basal ganglia နှင့် orbitofrontal cortex ၏ Schultz ဒဗလျူပါဝင်ပတ်သက်မှု။ prog ဦးနှောက် Res ။ 2000; 126: 193-215 ။ Doi: 10.1016 / S0079-6123 (00) 26015-9 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက် striatal presynaptic dopamine ပေါင်းစပ်စွမ်းရည်အတွက် Laakso တစ်ဦးက, Vilkman H ကို, Bergman J ကို, Haaparanta M က, Solin အို Syvalahti အီး, Salokangas RK, Hietala J ကို (2002) လိင်ကွဲပြားမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 52: 759-63 [PubMed]
Leyton M က, Dagher တစ်ဦးက, et al Boileau ငါ Casey K ကို Baker GB ကို, Diksic M က။ ကျန်းမာယောက်ျားတစ်ဦးပေ / [11C] raclopride လေ့လာမှု: စူးရှ phenylalanine / tyrosine ကွယ်ပျောက်သွားစေခြင်းဖြင့်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်လျော့ကျလာ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29 (2): 427-432 ။ [PubMed]
Lynch WJ ။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှအားနည်းချက်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2006; 14 (1): 34-41 ။ Doi: 10.1037 / 1064-1297.14.1.34 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McDougle CJ, Goodman wk, စျေး LH ။ ဆက်စပ်-နေကြပါပြီနှင့် psychotic ရောင်စဉ် obsessive compulsive ရောဂါအတွက် Dopamine ရန်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 55 (ပျော့ပျောင်း): 24-31 ။ [PubMed]
McLean တစ်ဦးက, Rubinsztein JS, Robbins TW, Sahakian BJ ။ ပုံမှန်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် tyrosine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများ: ရပ်များမှာတစ်ဘက်စွန်းစိတ်ကျရောဂါများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Psychopharmacology (Berl) 2004; 171 (3): 286-297 ။ Doi: 10.1007 / s00213-003-1586-8 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ထာ MA, Gumaste: D, Montgomery AJ, McTavish SF, Grasby pm တွင်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် Spatial အလုပ်လုပ် memory နဲ့စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအပေါ်စူးရှ tyrosine နဲ့ phenylalanine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှု striatal dopamine အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်နေကြသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2005; 180 (4): 654-663 ။ Doi: 10.1007 / s00213-004-2128-8 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McTavish SF, Callado L ကို, Cowen PJ, alpha-methyl-p-tyrosine နဲ့ Vivo အတွက်ကြွက် hippocampus အတွက် extracellular noradrenaline အပေါ်တစ်ဦး tyrosine-အခမဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဝန်၏သက်ရောက်မှု၏ Sharp က T က (1999a) နှိုင်းယှဉ်။ J ကို Psychopharmacol 13: 379-84 [PubMed]
McTavish SF, Cowen PJ, Sharp က T က (1999b) ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက် catecholamines ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိအပေါ်တစ်ဦး tyrosine-အခမဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်အရောအနှောများ Effect ။ Psychopharmacology (Berl) 141: 182-188 [PubMed]
Montgomery AJ, McTavish SF, Cowen PJ, Grasby pm တွင်။ အစားအသောက် tyrosine ပေါင်း phenylalanine ကွယ်ပျောက်သွားစေနှင့်အတူဦးနှောက် dopamine အာရုံစူးစိုက်မှု၏လျှော့ချရေး: တစ်ဦး [11C] raclopride ပေလေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 160 (10): 1887-1889 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.160.10.1887 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Munafo MR, မန်နီ ZN, Cowen PJ, Harmer CJ, McTavish SB ။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာနှင့် abstinent စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆေးလိပ်သောက်-related တွေကိုရွေးချယ်အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်စူးရှ tyrosine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Psychopharmacol ။ 2007; 21 (8): 805-814 ။ Doi: 10.1177 / 0269881107077216 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
နယ်လ်ဆင်တစ်ဦးက, Killcross အက်စ်ဖက်တမင်းဆေးပြားထိတွေ့မှုအလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26 (14): 3805-3812 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4305-05.2006 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
O 'Brien က MS, အန်သိုနီ JC ။ မှီခိုကင်းဖြစ်လာ၏အန္တရာယ်: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဘို့အ epidemiological ခန့်မှန်းချက်, 2000-2001 ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30 (5): 1006-1018 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300681 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pessiglione M က, Seymour B, Flandin, G, Dolan RJ, Frith CD တချပ်ဖြစ်တယ်။ Dopamine-မှီခိုခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများလူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူများကိုအထောက်အကူပြု။ သဘာဝ။ 2006; 442 (7106): 1042-1045 ။ Doi: 10.1038 / nature05051 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရော်ဘင်ဆင် OJ, အမြဲတမ်း HR, DeVito EE, Cool R ကို, Sahakian BJ ။ Dopamine ရှေ့ပြေးလျော့ကျကျန်းမာအမျိုးသမီးသော်လည်းမယောက်ျားအတွက်သင်ယူမှုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်စဉ်အတွင်းပြစ်ဒဏ်ခန့်မှန်းပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Psychopharmacology (Berl) 2010; 211 (2): 187-195 ။ Doi: 10.1007 / s00213-010-1880-1 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Roth ME, ME Carroll ။ ကြွက်များတွင်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင် IV စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်နောက်ဆက်တွဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများဝယ်ယူအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2004; 172 (4): 443-449 ။ Doi: 10.1007 / s00213-003-1670-0 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schultz dopamine အာရုံခံ၏ဒဗလျူခန့်မှန်းဆုလာဘ် signal ကို။ J ကို Neurophysiol ။ 1998; 80 (1): 1-27 ။ [PubMed]
Seeman သင်္ဘော MV ။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက် Psychopathology: အမျိုးသမီးဟော်မုန်းအာရုံစိုက်ပါ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997; 154 (12): 1641-1647 ။ [PubMed]
Sheehan bd, Tharyan P ကို, McTavish SFB, Campling GM က, Psychopharmacology 1996 ၏ Cowen PJ (10) ဂျာနယ် (3): 231-234 ။ Doi: 10.1177 / 026988119601000309 [PubMed]
Steinglass J ကို, Walsh BT ။ အလေ့အထသင်ယူမှုနှင့် anorexia nervosa: တစ်သိမြင်မှုမှ neuroscience ယူဆချက်။ int J ကို disorders စားပါ။ 2006; 39 (4): 267-275 ။ Doi: 10.1002 / eat.20244 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Strauss J ကို, Muday T က, McNall K ကို revisited Wong ကအမ်တုံ့ပြန်မှုစတိုင်သီအိုရီ: မွေးမြူရေးနှင့်အာရုံထဲမှာကျားမကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ကျပုံစံ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ။ 1997; 36 (11-12): 771-792 ။ Doi: 10.1023 / A: 1025679223514 ။ [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
တေလာကို PC, Nobre AC အ, Rushworth MF ။ ပဋိပက္ခနှင့်အရေးယူရွေးချယ်ရေးစဉ်အတွင်းလူ့ medial တိုကျရိုကျ cortex နေဖြင့်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ထိပ်တန်းချထိန်းချုပ် Subsecond အပြောင်းအလဲများကို: တစ်ပေါင်းစပ် transcranial သံလိုက်ဆွ electroencephalography လေ့လာမှု။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27 (42): 11343-11353 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2877-07.2007 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vanderschuren LJ, Ciano P ကို, Everitt BJ ။ cue-controlled ကင်းရှာထဲမှာ dorsal striatum ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25 (38): 8665-8670 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.0925-05.2005 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vrshek-Schallhorn S က, Wahlstrom: D, Benolkin K ကိုအဖြူရောင် T က, Luciana အမ်ကိုထိခိုက်ဘက်လိုက်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုမော်ဂျူကျန်းမာလူကြီးများအတွက် tyrosine လျော့ကျအောက်ပါ။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31 (11): 2523-2536 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301172 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Waelti P ကို, Dickinson တစ်ဦးက, Schultz ဒဗလျူ Dopamine တုံ့ပြန်မှုတရားဝင်သင်ယူမှုသီအိုရီ၏အခြေခံယူဆချက်ကိုလိုက်နာ။ သဘာဝ။ 2001; 412 (6842): 43-48 ။ Doi: 10.1038 / 35083500 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ် GJ, Volkow ND, Logan J ကို, Pappas ရော်ဘာ, Wong ကမှန် CT, Zhu W က, et al ။ ဦးနှောက် dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2001; 357 (9253): 354-357 ။ Doi: 10.1016 / S0140-6736 (00) 03643-6 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အဆိုပါ Wechsler အရွယ်ရောက်ထောက်လှမ်းရေးစကေး-ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအဘို့အ Wechsler ဃလက်စွဲစာအုပ်။ နယူးယောက်: စိတ်ဓာတ်ကော်ပိုရေးရှင်း; 1981 ။
Wetherington CL ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုများတွင်လိင်-ကျား, မကွဲပြားမှု: သက်သေများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခုပြောင်းကုန်ပြီ? Exp Clin Psychopharmacol ။ 2007; 15 (5): 411-417 ။ Doi: 10.1037 / 1064-1297.15.5.411 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wickens JR, Horvitz JC, ကော်စတာ RM, လုပ်ရပ်များနှင့်အလေ့အထများအတွက် Killcross အက်စ် Dopaminergic ယန္တရားများ။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27 (31): 8181-8183 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1671-07.2007 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]